सवैमा मेरो अपिल Globe Nepal News Portal
सवैमा मेरो अपिल
जिल्लावासी सम्पूर्ण दाजुभाई,दिदीबहिनी तथा साथीहरु,
तपाईंहरु सबैको शुभेच्छा र शुभकामना लिएर आज निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि जिल्ला तर्फ लाग्दैछु । तपाईंहरुको चासो र उत्साहको म उच्च सम्मान गर्दछु । सबैसंग भेट्ने,छलफल गर्ने मेरो चाहना र प्रयास सिमित समयका बावजुद सफल हुन सकेको छैन । म सबैलाई प्रष्ट पर्दछु, म तपाईंहरुको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हुँ । मेरो बारे तपाईंहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । म एउटा खुला किताब हुँ जसरी पढ्नु भए नि हुन्छ । मैले आजसम्म जे जति गरें, निष्ठा र इमान्दारीका साथ गरेको छु । तपाईंहरुले सधैं सहयोग गर्नु भएको छ । यसका लागि म आभारी छु ।
आसन्न चुनाव हामी व्यक्ति विशेषको होइन,यो सिंगो पार्टीको प्रतिष्ठाको विषय हो । यसका लागि पार्टीको नेतृत्व तहमा रहनु भएका साथीहरुले आवश्यक संयन्त्र बनाउने र सोही अनुसार परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको सुझाव निकै महत्वपूर्ण छ । हामीसंग थोरै समय छ,जिल्लाका गाउँ गाउँ पुग्नुछ ।
त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह कुन गाउँमा को संग छलफल गर्ने,कसलाई सम्पर्क गर्ने,त्यहाँ तपाईंको भूमिका के हुनेछ ? आउनुहोस् सबै यसमा जुटौं,होस्टेमा हैंसे गरौँ, हाम्रो छलफल जारी रहोस् । म सबै युवा साथीहरुलाई आ आफ्नो तर्फबाट समूह बनाएर जिल्लामा जुट्नका लागि आग्रह गर्दछु । यो समय निकै व्यस्त हुने हुनाले म सधैं यसरी अनुरोध गरिरहन परिस्थितिवश असमर्थ हुनेछु । यसका लागि अन्यथा नसोची दिनु होला ।
के कसो गर्दा हामीले कांग्रेसको गौरबलाई उँचो बनाउन सक्छौं ? आउनुहोस् यसका लागि छलफल गरौँ र जिल्लामा भेटौं,गाउँमा जुटौं,प्रचारमा हातेमालो गरौँ । यही नै मेरो अपील
सदा तपाईंहरुको साथमा ,
उम्मेदवार-नेपाली कांग्रेस ,प्रदेश- क
मेरो ओछ्यानमुनी बम पड्काउने आक्रोशबारे
कृष्ण पहाडी/नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवद्वारा २०७४ पुस २० गते...
सफल मान्छे के गर्छन् ?
देवेन्द्र प्रताप शाह/ एक सफल मान्छेको दिनचर्याको एउटा पक्ष तलको लिष्टमा समावेश छ । मान्छेको...
स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको नयाँ युग कि निषेधको राजनीतिको पुनरावृति ?
यादव पण्डित ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी ने.क.पा....